FBC - Barnoonni lammummaa fi naamusaa amma barbaadamu bu’aa buusuu dhabuun isaa qorannaan muul’ise
Barnoonni lammummaa fi naamusaa amma barbaadamu bu’aa buusuu dhabuun isaa qorannaan muul’ise
Finfinnee, Ebila 11,2009(FBC) –Barnoonni lammummaa fi naamusaa amma barbaadamu bu’aa buusuu dhabuu isaa, qorannaan Wiirtuu Qorannaa fi Qo’annaa Imaammataa fi Ministeerri Barnootaa waliin taasisan ifoomse.
Barnoonni lammummaa fi naamusaa akkasumas demokraasiin manneen barnootaa keessatti maal akka fakkaatu qorannichi muul’isuuf yaalera.
Barnoonni lammummaa kutaa 5 jalqabee kennamaa ture rakkoo hoggansaarraa kan ka’e bu’aa amma barbaadamu hin buusne jedhameera.
Qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoomanii hojjechuu dhabuun, qabiyyeen kitaaba barnootaa irra deddeebii ta’uu, haalli ittiin dhiyaate kaayyoo isaatin faallaa ta’uu, barnootichi bifa gurmaa’en hogganamuu dhabuunis rakkoolee isaan jajjaboo turan jedhameera.
Daayreektarri olaanaa wiirtichaa obbo Abbaay Tsahaayyee fi obbo Barakat Simi’oon waltajjicharratti yaada laataniin, rakkoo mudate furuun; sirreessuun barbaachisaadha jedhan.
Ministirri Ministeera Barnootaa Dooktar Shifarraaw T/maariyaam akka jedhanitti, barnooticha fooyyessuun bara dhufturraa kaasee hojiirra akka oolu ni hojjetama.
Muummeen ministiraa obbo Haaylamaariyaam Dassaalanyis rakkoo hoggansaarraa kan ka’e barnootichi bu’aa barbaadamu buusuu dhabuun isaa fudhatama akka qabu kaasanii, qooda fudhattoota hunda hirmaachisuun hojii qindaa’aa hojjechuun barbaachisaadhas jedhan.
Oduuwwan Biroo « Dooktar Warqinah Gibtsi daawwachaa jiru	Itiyoophiyaa fi Kaanaadaan hariiroo daldalaa isaanii cimsuuf waliigalan »